Empire Defender TD: Tower Defense Strategy Lalao TD Cheats&Hack – Torohevitra Android Cheats
Empire Defender TD: Tower Defense Strategy Lalao TD Cheats&Hack
ny Editor | septembre 30, 2021
Tompon-talenta mahay amin'ny lalao paikady ianao? Miroborobo amin'ny tetikadinao hendry ary miadia amin'ireo mpanohitra mahatahotra. Tariho ny maherifonao mahery ary arovy ny sisin'ny fanjakanao amin'ny maizina!
Ampidiro ny lalao paikady miaraka amin'ireo mpilalao an-tapitrisany amin'ny ady tsy misy farany eran'izao tontolo izao hahazoana fandresena sy laza.
Raha tena mpankafy Fantasy Tower Defense ianao, ity lalao paikady TD Offline ity dia tsy azo hadino! Ho gaga ianao amin'ny sary mahafinaritra sy ny lalao mahafinaritra.
Ny tanjonao amin'ity lalao paikady ity dia ny fananganana drafitrao manokana hiarovana ny seza fiandriananao sy hamongorana ireo mpanafika, mamerina ny fandriam-pahalemana amin'ny fanjakanao. Tsy io ihany no mahasarika ny toetra manintona indrindra amin'ny lalao TD, fa manana endri-javatra vaovao maro koa izay mitazona anao hilalao mandritra ny ora maro!
▶ Fiarovana tilikambo epika izay manintona, mahafinaritra sy maimaim-poana! Ataontsika hoe Battle TD izany (btd).
▶ Maody ivelan'ny seranana izay azonao lalaovina na aiza na aiza amin'ny fotoana rehetra.
▶ Sary ambony kalitao noho ny ankamaroan'ny lalao fiarovana sy tetika hafa.
▶ Diniho ny fahefana rehetra eny an-tananao, mianatra tsara momba ny fahavalonao mba hanana tetika sy tetika mety indrindra. Amboary ny fiarovanao tsara indrindra ary mahatrara fandresena be voninahitra!
▶ 120+ ny sarintany sy ny ambaratonga izay sarotra sy mahaliana amin'ny lalao paikady.
▶ 4 karazana Defense Towers miaraka amin'ny asany sy tanjaka isan-karazany, tonga miaraka 5 safidy azo havaozina. mpandefa tsipìka, Mage, mpiady, Dragon, Golem,..anao ny zavatra rehetra.
▶ 11 Maherifo manana hery sy fahaiza-manao samihafa. Safidio ny maherifonao hitarika ny btd 6 ady ary manaova valifaty. Resy na resy, miankina aminao!
▶ 10+ karazana Runes tsy manam-paharoa izay manampy amin'ny fanamafisana orina ireo maherifonao hahafahan'izy ireo manosika ireo mpampiasa sy mpanafika mahery setra.
▶ 30+ karazana fahavalo manana fahaiza-manao ratsy. Aza atao ambanin-javatra ireo mpanohana, na horavan'izy ireo ny tranonao!
▶ Ny ady mafy ataon'ny sefo amin'ity paikady mampiankin-doha ity sy lalao fiarovana menara ary fiarovana an-tany izay tsy ho hitanao mihitsy amin'ny lalao td maimaimpoana hafa.!
▶ 5 Fanampin'angovo – ireo tena mpamonjy amin'ny fotoana sarotra iarovan-tena.
▶ Mihoatra ny 100 zava-bita amin'ity lalao ity – miandry ny mpiaro mahery indrindra handresy!
▶ Fifaninanana fifaninanana: Andao hojerentsika hoe iza no mpiaro tsara indrindra amin'ny tompon-daka eran-tany, ny fanamby tsy manam-petra!
Lohalaho ary mihazakazaka miaro ny tranonao sy ny fanjakanao amin'ny fahavalo ratsy fanahy. Miomàna amin'ny ady epic indrindra td 6 amin'ny fotoana rehetra.
Miandry anao izahay hitaky ny anaram-boninahitra hoe Best Defender Ever!
Mifandraisa aminay raha mila fanampiana bebe kokoa momba ny Empire Warriors TD:
– Mailaka: empiredefender@zitga.com.vn
– Fanpage ofisialy: ny https://www.facebook.com/empire.defender.official
– Vondrona ofisialy: ny https://www.facebook.com/groups/empiredefender
Sokajy: Cheats sy Hack na toro-hevitra Tags: CheatsHack, Defender, fiarovana, FANJAKANA, Tapaka ny, tetika, tilikambo
← Idle Creepy Park Inc. – mangalatra&Hack Unicorn amin'ny bisikileta – mangalatra&Hack →